Ilhaan Cumar oo ka hadashay Xayiraadda Israa’iil saartay iyada iyo Xildhibaan Rashida | Aftahan News
Ilhaan Cumar oo ka hadashay Xayiraadda Israa’iil saartay iyada iyo Xildhibaan Rashida
Washigton (Aftahannews)- Ilhaan Cumar ayaa soo saartay qoraal ay uga jawaabeyso tallaabada Israa’iil ay ugu diiday in dhulkeeda ay galaan iyada iyo xildhibaan kale oo lagu magacaabo Rashida Dhaalib.
“Xubin ahaan oo ka tirsan guddiga Arrimaha Dibadda (Congress-ka), waa shaqadeyda in aan la socdo kaalmada caalamka ee Mareykanka uu bixiyo iyo sharciyeynta ku dhaqanka xuquuqda aadanaha ee daafaha caalamka”, ayey Ilhaan ku qortay warbixin ay ku baahisay boggeeda Twitter-ka.
“Waxaa wax laga xumaado ah in arrintan ayna la yaab lahayn, marka loo eego dhanka bulshada, kaas oo si joogto ah uga goos haysta dadaallada nabadda”, ayey tidhi Ilhaan.
Arrintan ayaa imaneysa iyadoo Israa’iil ay xayiraad kusoo rogtay laba gabdhood oo ka tirsan aqalka Congareska dalka Mareykanka kuwaas oo si weyn u dhaleecayn jiray Israa’iil, waxaana laga mamnuucay inay booqasho ku tegi karaan.
Ilhaan Cumar iyo Rashida Dhaalib ayaa lagu waday toddobadka soo socda inay booqasho ku tagaan dhulka la heysto ee Daanta Galbeed iyo bariga magaalada Qudus.
Sharciga Israa’iil waxaa uu dhigaya in dal ku-galka aan la siin karin qof kasta oo shisheeye ah oo wado olole looga soo horjeedo Israa’iil ha ahaato mid dhaqaale, dhaqan ama waxbarasho.